PLEKTRANTUS AROMATIC: ISTICMAALKA, GURYAHA LAGU DAWEEYO IYO KA HORJEEDA - DAAWADA DADWEYNAHA
Qalabka dawooyinka ee xayawaanka la isku qurxiyo: isticmaalka daawada dabiiciga ah iyo ka horjeeda
Plekrantrantus fragrant (ciyaaraha, naas) waa geedo digaag ah oo ka mid ah qoyska Yasnotkovyh.
Dalka Ruushka, wuxuu ka yimid Koonfur Afrika, sidoo kale wuxuu u qaybiyey Australia.
Plektrantus aromatic: Waxyaabaha kiimikada
Ka mid ah qaybaha geedka waxaa lagu kala saari karaa glycosides, borotiinada, carbohydrates iyo xitaa alkaloids. Sababo la xiriira baadhitaanka kiimikada, flavonoids, xayawaannada quininka, xeryaha phenol, fareeshka iyo terpenoids, iyo sidoo kale thymol, eugenol, pinen, cyneol iyo ursolic acid ayaa la ogaaday.
Neefsashada guryaha sifooyinka
Warshadu waxay awood u leedahay inay yeelato diaphoretic iyo choleretic, iyo sidoo kale u dhaqmaan sida daroogada anti-bararka iyo qalalaasaha, leedahay jilciye yar yar, expectorant iyo saameynta kicinta rabitaanka cuntada, hoos u dhicin jilbaha iyo caloosha, wuxuu fududeeyaa gastritis iyo laabotooyinka.
Waxaa loo isticmaalaa sida wax cayriin inta lagu jiro wax soo saarka daawooyinka wadnaha, boomaatada, dhibcaha.
Ma taqaanaa? Meelaha xiran, xayawaanku wuxuu awoodaa inuu la qabsado cayayaanka - duqsiyada, kaneecada, aboorada. Mid ka mid ah magaciisa rasmiga ah ee Ruushku waa duulis.
Sida loo isticmaalo plektrantus udgoon ee daawada dhaqameed
Plektrantus waxay si fiican u cadeeyeen daawada dhaqameed. Colds daaweeyo shaaha ka soo caleemaha shaaha caaga ah, loo isticmaalo qallafsan, naaquska mareenka caloosha, waxay ka nastaa cillad cillad maskaxda.
Waa muhiim! Mid ka mid ah tayada ugu muhiimsan ee Plectrantus waa saameyn xoog leh oo saa'id ah, sidaa daraadeed waxay si wanaagsan u saameeysaa nidaamka dareenka.
Dadka qaba dhibaatooyinka ba'an ee joogtada ah, welwelka, cabsida, shaaha ka yimid Plecrantus ayaa sidoo kale faa'iido leh.
Waxay leedahay saameyn saameyneysa, ka tirtirta xabada iyo candhuufta ka imanaysa sanbabada, waxay saamayn fiican ku yeelanaysaa boronkiitada, qufac aan fiicnayn, neefta neefta.
Saamaynta lagu duro iyo saameynta choleretic, caawinta daaweynta dhagxaanta kaadiheysta iyo kelyaha, saameynta cagaarshowga.
Qaybta qaabka 'decoction' ugu caansan ee leh shubanka iyo helminthiasis. Xanuun ku dhaca xubnaha taranka (rheumatoid arthritis) waxay yareeyaan tincture xajmiga.
Sida dalabka dibedda, Plectrantus ayaa isku sameeyay isaga oo la shaqeynaya boogaha maqaarka, cuncunka carruurta, xasaasiyadda maqaarka, iyo finanka xafaayadda.
Markaad qaniinto cayayaanka, waa inaadan ka baqin - plektranntus waxay kudagaalaan cuncun, waxay yareyneysaa cuncun iyo baabi'isaa barar.
Waa muhiim! Hindiya, dhirtaas waxaa lagu beeray, oo loo isticmaalo xummadda xummadda, waxaa lagu dhiirrigeliyaa naas-nuujinta ka dib dhalashada, xitaa qashin-qubka waxaa lagu daaweeyaa faleebo caleemo.
Qubeysiga karkhiga leh qandhicir faleebo leh enuresis
Enuresis waa cudur halis ah ee habka jimicsiga, kaas oo u baahan daaweyn adag. Qubeysi leh faleebo oo la yidhaahdo Plectrantus waxay saameyn fiican ku yeelaneysaa ilkaha.
Si aad u diyaariso qubeyska waa mid sahlan: 1 koob oo caleemo cusub oo la qalajiyey ama la qalajiyey ee warshadda ku shub 500 ml oo biyo nadiifa ah, oo ku dhajiya 45 daqiiqo, dheecaan.
Shub soo galiyey dhalada galay biyaha qubeyska. Qaado qubeyska faleebadan qiyaastii nus saac ee fiidkii ka hor wakhtiga jiifka.
Si kastaba ha ahaatee, nolosha shelf ee faleebadu waxay ka yar tahay hal maalin, taas oo macnaheedu yahay in cadaadis kasta loo baahan yahay si loogu diyaariyo faleebo cusub. Inta lagu gudajiro habka, heerkulka hawada waa inuusan ka badnaan 30 ° C.
Diyaarinta alaabta ceeriin ah oo laga soo qaato plectranthus
Qalabka ceeriin ah ee goosashada waxaa loo yaqaannaa caleemaha caleenta lagu daboolay ee xayawaanka la isku qurxiyo. Qalabka ceeriin ee daaweynta ee Plectranthans waxaa la goostay ka hor iyo inta lagu jiro marxaladda ubax ee firfircoon, oo markaas ka dibna dalxiiska geedka leh maaddooyin wax ku ool ah waa kan ugu sarreeya.
Waa lagama maarmaan in la sameeyo goosashada maalmo qalalan oo qoyan marka caleemaha laga ilaaliyo qoyaanka. Daboolka maqaarka ayaa la gooyaa oo la qalajiyaa hooska, sababtoo ah qorraxda ayaa waxyeello u leh walxaha ku jira caleemaha waxayna keenaysaa dheecaan saliida lagama maarmaanka ah.
Si kastaba ha noqotee, waa suurtogal in la qalajiyo xayndaabyada qalajiyaha, foornada, foornada - xakamaynta maskaxda ayaa lumin doonta dhammaan fitamiinada iyo macdanta. Haddii dhirta si habboon u qalajiso, waxay haysaa caro aad u muuqata.
Sida loo isticmaalo xakamaynta cuntada
Dalal kala duwan oo dunida ka mid ah, carafka lafdhabarta ayaa loo adeegsadaa karinta - waa caan ka mid ah caanaha oo loo isticmaalo cuntooyin kala duwan. In Indonesia, waxaa loo isticmaalaa sida cunnooyinka maraqa iyo salad, Thailand iyo Cuba - ku daray shaaha, Russia - marka khudradda cagaaran, iyo sidoo kale sida bahalka hilibka iyo hilibka digaagga.
Kala soocida xayndaabyada bacda iyo kalluunka. Cuntada qalalan ee macaan ayaa lagu diyaariyaa Jamaica - caleemaha waxaa lagu dubay shiil miro ah. Faransiiska, caan ku ah winemaking ay, loo isticmaalo soo saarista liqueurs, sharoobada, khamri.
Talyaaniga, caleemaha pizza waxaa lagu qurxiyaa caleemaha cirridka, oo lagu daray koorsooyinka koowaad iyo macmacaanka. Dhammaan tani waxay suurtogal u tahay ariquudka macaan, dhadhanka jilicsan iyo midabka dhalaalaya.
Ma taqaanaa? Mawduuca Isbaanishka ama Faransiiska, Cuban oregano, Foornada Maraq, Bulliga Hindiya, Noocaha Mexico ayaa ah noocyo kala duwan oo looxyo.
Contraindications iyo saameynta daawooyinka marka la isticmaalayo
Inkasta oo dhirta ay leedahay noocyo badan oo la isticmaalo, waxaa sidoo kale jira waxyaabo ka hortag ah qaadashada Plektranthus. Waa mamnuuc inaad u qaadatid xaamilo iyo naas-nuujin, iyo sidoo kale carruurta ka yar 12 sano.
Haddii loogu talagalay dadka qaarkood dareenka maqaarku waa dabeecad, la xiriir caleemaha iyo caleemaha naasaha qolka wuxuu keeni doonaa heer dhexdhexaad ah oo ah dermatitis. Xasaasiyadda iyo idiosyncrasy waa khatar weyn.
Haddii ay dhacdo isku-buuqid, ari-macmacaan leh sidoo kale waa waxyeello: waxay yarayn kartaa cadaadiska qiimaha muhiimka ah. Isticmaal aan loo baahnayn oo loogu talagalay dadka leh xididdada xajmiga leh.
Sidoo kale waa in aad caadi ahaan u isticmaashid isticmaalka xayeysiinta, maaha in aad marar badan qaadato - waxay ku kicin kartaa miyir-beeleed haddii lagu xadgudbo.
Sidaa darteed, Plektranthus waxay caawimaad ka geysan kartaa dhinacyada kala duwan ee nolosha aadanaha, laga bilaabo daawooyinka ilaa qashin-qaadka, iyo in ay rumaysanyihiin eesotericism: iyada oo muuqaalkeeda quruxda leh ee quruxda leh, waxay soo jiidan doontaa madadaalo iyo nasiib wanaag nolosheeda oo dhan.